အကျိုးမြတ်မရခဲ့တဲ့ USB တီထွင်သူ – Gentleman Magazine
U S B အကြောင်း သိကောင်းစရာ
ကွန်ပျူတာတွေ၊ ဖုန်းတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ USB ပေါက်တွေ အကြောင်းကို သိပါသလား?
USB ရဲ့ အရှည်ကတော့ Universal Serial Bus ဖြစ်ပြီး အခုလက်ရှိ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက နည်းပညာသုံးပစ္စည်းတွေ အားလုံးနီးပါးမှာ မပါမဖြစ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီ USB တွေရဲ့ အသုံးဝင်မှုကို တော်တော်များများ သိထားပြီးဖြစ်ပေမယ့် USB နဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အချက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။
ဒီအချက်ကတော့ USB နည်းပညာကို တီထွင်ခဲ့သူဖြစ်တဲ့ Ajay Bhatt ဟာ သူ့ရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာအကျိုးအမြတ်မှ မခံစားခဲ့ရဘူးဆိုတာပါပဲ။ Ajay Bhatt ဟာ Intel ကုမ္ပဏီရဲ့ စစ်စတမ်းနည်းပညာရှင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီး USB နည်းပညာကို ဦးဆောင်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောက် အသုံးတွင်ကျယ်နေတဲ့ USB နည်းပညာကို တီထွင်ခဲ့သူ Ajay Bhatt အနေနဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့အထိ အခွင့်အရေးရှိပေမယ့် မရခဲ့ပါဘူး။ တကယ်တော့ USB နည်းပညာပေါ်က အကျိုးအမြတ်ကို Ajay Bhatt မှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မခံစားခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီနည်းပညာကို မူပိုင်ခွင့် ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Intel ကုမ္ပဏီက USB နည်းပညာကို ဘယ်သူမဆိုအခမဲ့ အသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
USB နည်းပညာကို တီထွင်ခဲ့သူ Ajay Bhatt ကလည်း သူ့အနေနဲ့ ဒီနည်းပညာကို ငွေကြေးအတွက် တီထွင်ခဲ့တာ မဟုတ်ကြောင်း၊ အပြောင်းအလဲတစ်ခု ဖြစ်ဖို့ ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားထားပါတယ်။ အခုဆိုရင် USB နည်းပညာဟာ ပစ္စည်းတော်တော်များများကို ချိတ်ဆက်ရာမှာ မရှိမဖြစ်နည်းပညာတစ်ခု ဖြစ်လာနေပါပြီ။
နည်းပညာသုံးပစ္စည်းတွေ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ချိတ်ဆက်ဖို့ တစ်ခုတည်းသောပစ္စည်းဆိုတဲ့ Bhatt ရဲ့ စိတ်ကူးက တကယ်ကိုကောင်းပေမယ့် နာမည်ကြီး နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Apple နဲ့ Microsoft တို့ကို တင်ပြချိန်က သိပ်စိတ်မ၀င်စားခဲ့ပါဘူး။ Intel ကုမ္ပဏီကသာ Bhatt ရဲ့စိတ်ကူးကို လက်ခံပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ Intel ကုမ္ပဏီက USB နည်းပညာကို ထောက်ပံ့တဲ့ Chips တွေ စတင်ဖန်တီးခဲ့ပေမယ့် သုံးစွဲသူလက်ထဲကို ပထမဆုံးအရောက်ပို့ပေးခဲ့တာကတော့ Apple ကုမ္ပဏီကဖြစ်ပါတယ်။ Apple က ၁၉၉၈ ခုနှစ်ထုတ် iMac G3 ကွန်ပျူတာတွေမှာ USB နည်းပညာကို စတင်ထည့်သွင်းပေးခဲ့သလို Microsoft ကုမ္ပဏီကလည်း Window 98 Second Edition တွေကစပြီး ထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါတယ်။
Bhatt အနေနဲ့ အကျိုးအမြတ်တစ်စုံတစ်ရာမရရှိခဲ့ပေမယ့် သူ့ရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုက ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းမှာ အရေးပါအရာရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူတီထွင်ခဲ့တဲ့ USB နည်းပညာက သုံးစွဲရလွယ်ကူတဲ့အတွက် ကွန်ပျူတာဈေးကွက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလို ကွန်ပျူတာဈေးကွက် ကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှ Intel ကုမ္ပဏီက chips တွေ ပိုရောင်းရလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချက် မြင်တဲ့အတွက်လည်း Intel ကုမ္ပဏီက USB နည်းပညာကို မူပိုင်ချုပ်ကိုင်မထားပဲ လွတ်လပ်စွာအသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Bhatt ကတော့ သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီအကျိုးအမြတ်ပိုရလာတာနဲ့ သူတို့လည်း အကျိုးအမြတ်တွေ ပိုခံစားလာရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျေနပ်မိကြောင်း ပြောကြားထားပါတယ်။ အခုနောက်ထပ် Bhatt ရဲ့ ခြေလှမ်းသစ်အနေနဲ့ ဘယ်နည်းပညာသုံးပစ္စည်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Stylus pen ကို ဖန်တီးဖို့ ကုမ္ပဏီ (၃၅)ခုနဲ့ တွဲဖက်လုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဗဟုသုတနှင့် ပက်သက်သော ဆောင်းပါးများကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုချင်တယ်ဆိုရင် http://mmgentleman.com/category/knowleadge/ မှာအလွယ်တကူ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
U S B အကွောငျး သိကောငျးစရာ
ကှနျပြူတာတှေ၊ ဖုနျးတှမှော ပါဝငျတဲ့ USB ပေါကျတှေ အကွောငျးကို သိပါသလား?
USB ရဲ့ အရှညျကတော့ Universal Serial Bus ဖွဈပွီး အခုလကျရှိ ကမ်ဘာတဈဝှမျးက နညျးပညာသုံးပစ်စညျးတှေ အားလုံးနီးပါးမှာ မပါမဖွဈတဲ့ အစိတျအပိုငျးတဈခု ဖွဈနပေါပွီ။ ဒီ USB တှရေဲ့ အသုံးဝငျမှုကို တျောတျောမြားမြား သိထားပွီးဖွဈပမေယျ့ USB နဲ့ပတျသကျပွီး စိတျဝငျစားစရာကောငျးတဲ့ အခကျြတဈခုရှိပါသေးတယျ။
ဒီအခကျြကတော့ USB နညျးပညာကို တီထှငျခဲ့သူဖွဈတဲ့ Ajay Bhatt ဟာ သူ့ရဲ့တီထှငျဖနျတီးမှုနဲ့ ပတျသကျပွီး ဘာအကြိုးအမွတျမှ မခံစားခဲ့ရဘူးဆိုတာပါပဲ။ Ajay Bhatt ဟာ Intel ကုမ်ပဏီရဲ့ စဈစတမျးနညျးပညာရှငျခေါငျးဆောငျဖွဈပွီး USB နညျးပညာကို ဦးဆောငျဖနျတီးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒီလောကျ အသုံးတှငျကယျြနတေဲ့ USB နညျးပညာကို တီထှငျခဲ့သူ Ajay Bhatt အနနေဲ့ သနျးကွှယျသူဌေးတဈယောကျ ဖွဈတဲ့အထိ အခှငျ့အရေးရှိပမေယျ့ မရခဲ့ပါဘူး။ တကယျတော့ USB နညျးပညာပျေါက အကြိုးအမွတျကို Ajay Bhatt မှ မဟုတျပါဘူး။ ဘယျသူတဈဦးတဈယောကျမှ မခံစားခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဒီနညျးပညာကို မူပိုငျခှငျ့ ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ Intel ကုမ်ပဏီက USB နညျးပညာကို ဘယျသူမဆိုအခမဲ့ အသုံးပွုခှငျ့ပေးခဲ့တာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။
USB နညျးပညာကို တီထှငျခဲ့သူ Ajay Bhatt ကလညျး သူ့အနနေဲ့ ဒီနညျးပညာကို ငှကွေေးအတှကျ တီထှငျခဲ့တာ မဟုတျကွောငျး၊ အပွောငျးအလဲတဈခု ဖွဈဖို့ ဖနျတီးခဲ့တာဖွဈကွောငျး ပွောကွားထားပါတယျ။ အခုဆိုရငျ USB နညျးပညာဟာ ပစ်စညျးတျောတျောမြားမြားကို ခြိတျဆကျရာမှာ မရှိမဖွဈနညျးပညာတဈခု ဖွဈလာနပေါပွီ။
နညျးပညာသုံးပစ်စညျးတှေ တဈခုနဲ့တဈခု ခြိတျဆကျဖို့ တဈခုတညျးသောပစ်စညျးဆိုတဲ့ Bhatt ရဲ့ စိတျကူးက တကယျကိုကောငျးပမေယျ့ နာမညျကွီး နညျးပညာကုမ်ပဏီကွီးတှဖွေဈတဲ့ Apple နဲ့ Microsoft တို့ကို တငျပွခြိနျက သိပျစိတျမဝငျစားခဲ့ပါဘူး။ Intel ကုမ်ပဏီကသာ Bhatt ရဲ့စိတျကူးကို လကျခံပွီး အကောငျအထညျဖျောဖို့ ရငျးနှီးမွုပျနှံပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ Intel ကုမ်ပဏီက USB နညျးပညာကို ထောကျပံ့တဲ့ Chips တှေ စတငျဖနျတီးခဲ့ပမေယျ့ သုံးစှဲသူလကျထဲကို ပထမဆုံးအရောကျပို့ပေးခဲ့တာကတော့ Apple ကုမ်ပဏီကဖွဈပါတယျ။ Apple က ၁၉၉၈ ခုနှဈထုတျ iMac G3 ကှနျပြူတာတှမှော USB နညျးပညာကို စတငျထညျ့သှငျးပေးခဲ့သလို Microsoft ကုမ်ပဏီကလညျး Window 98 Second Edition တှကေစပွီး ထညျ့သှငျးပေးခဲ့ပါတယျ။
Bhatt အနနေဲ့ အကြိုးအမွတျတဈစုံတဈရာမရရှိခဲ့ပမေယျ့ သူ့ရဲ့တီထှငျဖနျတီးမှုက ကှနျပြူတာလုပျငနျးမှာ အရေးပါအရာရောကျခဲ့ပါတယျ။ သူတီထှငျခဲ့တဲ့ USB နညျးပညာက သုံးစှဲရလှယျကူတဲ့အတှကျ ကှနျပြူတာဈေးကှကျ ပိုမိုကယျြပွနျ့သှားခဲ့ရပါတယျ။ ဒီလို ကှနျပြူတာဈေးကှကျ ကယျြပွနျ့လာတာနဲ့အမြှ Intel ကုမ်ပဏီက chips တှေ ပိုရောငျးရလာခဲ့ပါတယျ။ ဒီအခကျြ မွငျတဲ့အတှကျလညျး Intel ကုမ်ပဏီက USB နညျးပညာကို မူပိုငျခြုပျကိုငျမထားပဲ လှတျလပျစှာအသုံးပွုခှငျ့ပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
Bhatt ကတော့ သူ့ရဲ့ကုမ်ပဏီအကြိုးအမွတျပိုရလာတာနဲ့ သူတို့လညျး အကြိုးအမွတျတှေ ပိုခံစားလာရတာဖွဈတဲ့အတှကျ ကနြေပျမိကွောငျး ပွောကွားထားပါတယျ။ အခုနောကျထပျ Bhatt ရဲ့ ခွလှေမျးသဈအနနေဲ့ ဘယျနညျးပညာသုံးပစ်စညျးမှာပဲဖွဈဖွဈ အသုံးပွုနိုငျတဲ့ Stylus pen ကို ဖနျတီးဖို့ ကုမ်ပဏီ (၃၅)ခုနဲ့ တှဲဖကျလုပျကိုငျနပွေီဖွဈပါတယျ။
ဗဟုသုတနှငျ့ ပကျသကျသော ဆောငျးပါးမြားကို ဆကျလကျဖတျရှုခငျြတယျဆိုရငျ http://mmgentleman.com/category/knowleadge/ မှာအလှယျတကူ ဝငျရောကျလလေ့ာနိုငျပါတယျ။
Previous: ကျန်းမာပျော်ရွှင်သောဘ၀ နေထိုင်မှုပုံစံ
Next: ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အနေထိုင်အပြုအမူများ